देशभक्त हुनका लागि पार्टीको सिद्धान्तमात्र राष्ट्रवादी भएर पुग्दैन, पार्टी हााक्ने नेताको मुटुभित्र पनि राष्ट्र हुनुपर्छ । सिद्धान्त बगारेर राष्ट्रवादी बन्नु र देशको एक खण्डको मात्र माँग गर्नु भनेको भनेको लेण्डुप, मिर्जाफर हुनु हो जो कहिल्यै राष्ट्रवादी हुन सकेनन् । इतिहासको पन्नामा सरापमा सिमि तबनेका छन् । ।
अरस्तुले भनेका थिए– भूगोलको जानकारी बिना राजनीतिको ज्ञानमा बृद्धि हुनसक्दैन । यसैगरी नेपोलियन बोनापार्टले व्यवहारिक ज्ञानपछि भनेका हुन्– कुनै देशको बिदेश नीति त्यस देशको भूगोलद्वारा निर्धारित हुन्छ । राजनीतिक यथार्थ यही हो, जुन वर्तमान कालखण्डमा हरेक मुलुकले अंगीकार गरेका छन् ।
नेपालको भौगोलिक बनोट विषम छ, यसभित्र हिमाल छ, पहाड र समथल भूभाग छ । जनसंख्याको बनावट यस्तो छ कि यहाा १ सय २६ जाति बसोबास गर्छन्, अनेकतामा एकताको अनुपम मिश्रणको दृश्य हो यो । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नेपालको जस्तो विषमतायुक्त विशेषता पाउन सकिन्न ।
यसकारण नेपालको भूगोल विश्वमै अनौठो छ र दक्षिण एसियाका लागि त नेपाली भूगोल सामरिक महत्वकै मानिएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि झापाको केचनाकलनजस्ता होचा भाग पनि नेपालमै पर्छ । विश्वका सबैभन्दा पुराना र कहिल्यै उपनिवेश नबनेको ४ राष्ट्रमध्येको भर्जिन राष्ट्र हो नेपाल । यस्तो देशमा आतंककारीले जनयुद्ध गरे र तिनीहरुनै संसदबादीमा रुपान्तरण भएर राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल हुनपुगे । जसका कारणले बिगत १२ वर्ष अराजक र अस्थिर बनेको नेपाल यतिबेला संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको नौलो अभ्यासमा जुटेको छ । यो अभ्यासको पृष्ठभूमि शान्ति र समृद्धिका लागि भनिएको छ ।
स्थापित आमविश्वास हो– लोकतान्त्रिक शक्ति अतिवादी हुनसक्दैन । अतिवादी हुनु भनेको निरंकूशता हुनु हो । आजको युग हिटलर जन्माउने कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । संयुक्त मधेसी मोर्चा जिरह गरेर भनिरहेको छ– हामीलाई मधेस प्रदेश नै चाहिन्छ । मधेस प्रदेशमा पहाड मिसाउन पाइदैन । नभन्दै बनेको सात प्रदेशमध्येको २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय पोसाक बर्जित गरियो । यसलाई संविधानविरोध भनेर मानिएन, संविधानसम्मत ठानियो ।
मधेसमा पहाड मिसाउन किन पाइदैन ? पहाड नेपाल होइन ? मधेस नेपालभन्दा पृथक भूमि हो ? मधेस किन बहुलराष्ट्रवादको नारा उछालिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र हो, नेपालको राष्ट्रियता एउटै छ । त्यो हो नेपाली राष्ट्रियता ।
५४ हजार बर्गमाइलको नेपाली भूभाग एक थियो, एक छ र एक रहनेछ । यो भूभागमा बसोबास गर्नेहरु एकक्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा आवतजावत गर्न स्वतन्त्र छन् र एउटा क्षेत्रलाई अलग गर्नुपर्छ भन्नु बिकृत मानसिकता हो । ठाडो शव्दमा भन्ने हो भने त्यो राष्ट्रघात नै हो । मधेसमात्र प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माँग अराष्ट्रिय माग हो ।
यी माग माग्ने को को रहेछन् ? राजपा र संघीय फोरमका नेताहरु । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार (नेपाली कांग्रेस) हरु यी यस्ता नेता हुन्, जसको बिगतलाई कोट्याउने हो भने उनीहरुको नियतमै खटप्वाल देखिन्छ । महन्थ ठाकुरले त यतिसम्म भनेका छन् कि एक मधेस हुन्न भने एक नेपाल पनि रहन्न । एउटा खााटी नेपालीले यसो भन्नसक्छ ? तर भनिरहेका छन् र चुनावपछि पनि मधेसको स्वायत्तता, बहुल राष्ट्रवाद सहितको अंगीकृतको हक उल्लेख गर्न संविधान संशोधनको माँग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थ थिचिदै गएको छ । हिजो यिनै हुन् पहाडेले पहाडतिरै लघारिन्छ, यिनको रगत चाटिन्छ भनेर नारा लगाउने । यिनले छिमेकले बोक्यो, अहिले पनि छिमेकले छाता ओढाइरहेको छ । चुनाव जितेपछि राजेन्द्र महतोले भारत भएन भने नेपालले श्वास पनि फेर्न सक्दैन भनेका छन् । यसो भन्नेमा स्वाधीनता र स्वाभिमान कति होला ? यस्ता नेतालाई हामीले चुनाव जिताएका छौं । अनि यस्ताले राष्ट्रको पहरेदारी कसरी गर्छ ?
निश्चय नै बिभेद छ, सुधार्नुपर्ने र समानताका अनेक कामहरु गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । त्यही गर्न त लोकतन्त्र ल्याएको । गर्नैपर्ने प्राथमिक कामहरु गरेर शान्ति र समुन्नतिको राजमार्ग निर्माण गराउने जिम्मेवारीका लागि त जनप्रतिनिधिमूलक पद्धति अपनाएको । चुनाव भयो, अव ती कामहरु गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको काँधको कर्तव्य हो । ती काम नगर्ने अनि एक नेपाललाई बिखण्डन र बिभाजनको हावा दिने । यही हावालाई आाधी हुरी बनाउन सिके लालजस्ता चिन्तकहरु सुधार्न होइन बिगार्न जातीय दङ्गा गराउन मधेसी र पहाडीलाई हुडल्दै छन् । हुन त यस्ता हुँडारहरुको काम देश बनाउने र बचाउने हुनैसक्दैन किनभने यिनले भोगटेका चस्मा लगाएका छन् र खस बाहुनले लुट्यो भन्नमात्र जानेका छन् । सबै जातिलाई कसरी समानताको डोरीले बााध्न सकिन्छ, कसरी सद्भाव र प्रेम बढाउादै देश निर्माणमा सबैको समान कर्तव्य र अधिकार जोड्न सकिन्छ, किटाणु सलबलाएका दिमागमा सकारात्मक र सुधारात्मक सोच प्रदेश नै गर्नसक्दैन । जसको जीवनको उद्देश्य नै बिथोल्ने छ, विध्वंश गराउने छ, उसले शान्ति व्यवस्था कसरी सोच्न सक्छ र ?
समस्या मधेसमा छ, समस्या पहाड र हिमालमा पनि छ । समस्या मधेसीमा छ, समस्या बाहुन र खसमा पनि छ, १ सय २६ जातिमै छ । हो, हुनेखाने र हुँदा खानेका वीचमा दूरी बढेको छ । बुद्धिजीवी, चिन्तक, नागरिक अगुवाको काम हो, यो दुरी कसरी घटनाउने भनेर अक्किल निकाल्ने, राज्यलाई लोककल्याणकारी मार्गमा लगाउने । त्यो राष्ट्रिय दायित्वको निर्वहन गर्ने मधेसका अगुवा कतिजना छन् ? जो नेपाल मेरो देश भन्छन्, ती नेपाली मधेसी समुदायमाथि सिके लाल, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरजस्ता बिखण्डनको विष बोकेर हिड्ने मधेसका सामन्तहरुले थिचोमिचोमा पारेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
प्रष्टै छ, राजपाले मधेसलाई अलग देश बनाउन खोजेकै हो । त्यसमाथि सिके राउतजस्ता र अनेकन भूमिगत सशस्त्र समूहहरुलाई हतियार बनाएर र विदेशी ताकतको प्रभावमा यिनले चुनाव जितेका हुन् । त्यसैले त यिनीहरु पहाड र हिमालबाट मधेसलाई जोड्नु हुन्न भनेर नारा घन्काइरहेका हुन् । यसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्न, हुनै सक्दैन । नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो भने यस प्रकारको क्षेत्रीयता, जातीयताको आवाज समन गर्नैपर्छ ताकि हिंसाको डढेलो नसल्कियोस् ।
हिजो माओवादी जनयुद्ध अतिवाद थियो, आज मधेसको बहुल राष्ट्रवाद अतिवाद बनेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस यस्तो आवाजलाई किन सहिरहेका छन्, स्पष्ट शव्दमा नकार्न किन सकेनन्, यो आलोच्य यसकारण छ कि यिनीहरु सत्तास्वार्थ पूर्ति गर्न यिनको आवश्यकता ठान्छन् । राष्ट्रिय पार्टीहरुले राष्ट्र हेर्ने, सोच्ने हो कि सत्ताको सोचमा सिमित हुने हो ? हिजो सिक्किमीकरण भनिदै थियो, आज फिजीकरणमात्र होइन, राष्ट्रै टुक्य्राउने साजिस हुँदैछ । यस्ता साजिसविरुद्ध नागरिक संचेतना र जागरुकता जरुरी छ ।
अव खुलेर बहस थालिनुपर्छ । शान्ति र समुन्नति, एकता र सद्भाव, सबै प्रकारका बिभेद र विषमता हटाउन राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर चुनावमा जनादेश दिने जनताले सही मार्ग पनि देखाउन आवश्यक छ । नागरिक बहसले मात्र, नागरिक आवाजले मात्र बिखण्डन र बिभाजनका श्वरहरुलाई निस्तेज र अप्रभावी बनाउन सक्छ ।
राजतन्त्र फालियो, के भयो ? संविधानसभाले निकै बर्ष लुट्यो, के भयो ? बल्ल संविधान जारी भयो र चुनाव सकिएको छ, नैतिक बन्न सकिएन भने के होला ? हिजो जुन नेता थिए, आज तिनै नेता हामीले छानेका छौं । हिजो जुन पार्टी थिए, तिनै पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । हिजो जसले राष्ट्रबिरोधी आवाज उठाएका थिए, आज तिनकै आवाज उर्लिएको छ । राजनीतिको सवारी हाँक्ने यिनै चालकहरुलाई राष्ट्रियताप्रति गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ अघि बढ्न बाध्य पार्ने, प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी जनतामा आएको छ । अन्यथा धर्म र राजा फाल्नेहरु ठूलाले आफूलाई राजा र सानाले आफूलाई रजौटा साबित गर्नेछन् । राज्य टुक्रिने खतराका आहट सुन्नेले सुन्न थालिसकेका छन् । संघीयताको डिजाइनभित्र देख्नेले राष्ट्रघातक खतरनाक योजना देखिसकेका छन् ।
त्यसैले राज्य दरो हुनुपर्छ । जनता र सेनाले लड्न सिक्नुपर्छ । जनता भाँड्ने र देश टुक्य्राउने जो कोही होस्, उसलाई शंकाको छुट दिदै जाने हो भने देश बर्बादीको तारेभीरबाट गुल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ । दण्डहीनताको त्यही कमजोरीले गर्दा आज उँधो न उँभोको स्थिति छ ।
संविधानको घोषणापछि देशमा लोकतन्त्रको स्वर्णकाल आयो भनिएको थियो, देशको पतनकाल साबित भइरहेको छ । मुखले हिमाल, पहाड, तराई– कोही छैन पराई भन्ने अनि व्यवहारले मधेसमा बहुल राष्ट्रवाद भन्ने जिरह के हो ? रुखमा लागेको ऐंजेरु काटिएन भने रुखमा फलै लाग्दैन । ऐंजेरु बेलैमा कलमी गर्न सकिएन भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने जोखिम छ । देश कित्ताकाट गर्ने कुनै पार्टीको मौजा बन्न सक्दैन । एक नेपाल र एक नेपाली संविधानले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ, गरेको छ, त्यही संवैधानिकतालाई सार्वभौमिकताको ग्यारेण्टी मान्नुपर्छ, जो मान्दैन उसको भूमिकामा बन्देज लगाउनुपर्छ । राष्ट्रभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति वा पार्टी हुनसक्दैन ।
जनबलसहित स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पुगेकाहरुले देशको कुरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक समस्याको हल संसदबाट निकाल । देश फोड्ने होइन, जोड्नेतिर लाग । जनादेश देश बनाउन दिएका हुन् जनताले, जनादेशको सम्मान गर । कहाँ कहाँ छ, कमी कमजोरी सच्याउ, देशलाई नहोच्याउ । गौरव गर देशप्रति, देशमाथि बलात्कार नगर । अव देश घातकहरु उम्लिने र जिम्लिने, संविधानले आँखा चिम्लिने समय कायम रहनु भनेको असफल हुनु हो ।
आगामी दिन शान्ति, सुशासन र समृद्धिको हो । यसका लागि गर्नुपर्ने काम गर, देश भाँड्ने काम नगर ।